Iprofayile yeNkampani-AMANDLA e-YTO
I-YTO AMANDLA ngumvelisi weinjini yedizili okhokelayo eChina kunye nenkxaso yeqela le China YTO
Kwi-YTO AMANDLA, sineZiko lethu lobuGcisa (iZiko lobuGcisa leLizwe) lokwenza uphando ngeenjini zedizili, kwaye sinamaqhina asondeleyo kumaziko ophando adumileyo afana ne-AVL e-Austria, Jamani FEV eJamani, YAMAHA eJapan kunye neZiko loPhando laseMazantsi-ntshona e iunited States. Uphando lwethu kunye namandla ophuhliso, kunye nomsebenzi onzima wabasebenzi abanamava, basenza ukuba sikwazi ukuqhubeka nokuphuhlisa iinjini zethu zedizili.
Kwi-YTO AMANDLA, senza iimveliso zethu ngokuhambelana nemigangatho yamazwe aphesheya. Siyi-ISO9000, ISO14000 kunye ne-TS-16949 eqinisekisiweyo, kwaye iinjineli zethu zedizili, ziyaqinisekiswa yi-US EPA, iEuropean Emark kunye nesiqinisekiso seEC. Namhlanje, iimveliso zethu zifunwa kakhulu ngabathengi ngabathengi behlabathi.
Okwangoku sinee-basel ezimbini eziphambili zokuvelisa i-injini yedizili, enye kwiSixeko saseTaizhou, kwiPhondo le-Jiangsu, ivelisa i-YD (YANGDONG) uthotho lwee-silinda ezintathu kunye neenjini ezine-silinda ezinamandla ukusuka kwi-10kw ukuya kwi-100kw, kunye nakwenye yeLuyang City, kwiPhondo laseHenan, ukuvelisa i-LR kunye ne-YM yoluhlu lweine-silinda ezine kunye ne-injini zadizili ezi-silinda eziyisithupha. Amandla e-ramg ukusuka kwi-100KW ukuya kuma-500kw. Ngenethiwekhi yethu yentengiso yamanye amazwe, iimveliso ze-YTO POWER ngoku zithengiswa kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla kwihlabathi liphela.
Thina kwi-YTO AMANDLA sijonge phambili ekusebenzeni nabathengi kwihlabathi liphela ukwenza ikamva elingcono! Nceda unxibelelane neqela lethu lokuthengisa ngolwazi oluthe kratya.